IP67 , IP68 ရေစိုခံ စံနှုန်း ဆိုတာဘာလဲ? – DigitalTimes.com.mm
IP67 , IP68 ရေစိုခံ စံနှုန်း ဆိုတာဘာလဲ?
Ko Thuya Jul 18, 2018
ဒီနေ့ခေတ် စမတ်ဖုန်းများဟာ ရေစိုခံတယ်လို့ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီများက ကြော်ညာနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေစိုခံစံနှုန်းများစွာ ရှိတဲ့အတွက် သင့် စမတ်ဖုန်းဟာ ဘယ်လောက်အထိရေစိုခံသလဲဆိုတာ လေ့လာထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
IP ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်
IP ရဲ့ အရှည်ဟာ Ingress Protection ဖြစ်ပြီး ဖုန်းအတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို ရေ၊ ဖုန်များ မထိအောင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ စံနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ IP ရဲ့ နောက်မှ ဂဏန်းများကတော့ ကာကွယ်မှု စွမ်းရည်ကို ဖော်ပြပါတယ်။ ဂဏန်းနှစ်လုံးရဲ့ အရှေ့ဘက် ဂဏန်းဟာ ၅ နဲ့ ၆ များ အများစု ဖြစ်ပါတယ်။ ၅ ဟာ ဖုန်များကို ရာနှုန်းပြည့် မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ၆ ကတော့ ဖုန်၊ သဲများကို ရာနှုန်းပြည့် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ IPX8 လို့ သတ်မှတ်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒါကတော့ ကုမ္ပဏီဟာ IP စံနှုန်းကို တိကျစွာ မဖော်ပြချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
IP စံနှုန်းမှာ ဒုတိယ ဂဏန်းဟာ ရေစိုခံ စွမ်းရည်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သူဟာ ပထမ ဂဏန်းထက် ပိုမို ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ် စမတ်ဖုန်းများမှာ ဒုတိယ ဂဏန်းဟာ အနည်းဆုံး ၃ ၊ ၄ ကနေ စပြီး အဲဒါဟာ ရေစက်ရေပေါက်များကို ခံနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။ မိုးရေထဲမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုစွမ်းရည်မြင့်မားတာက နံပါတ် ၅ က စပါတယ်။ နံပါတ် ၅ ဟာ ၆.၃ မီလီမီတာ ရေပိုက်ခေါင်းက ထွက်လာတဲ့ ရေဒဏ်ကို ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ခံနိုင်ပါတယ်။ နံပါတ် ၆ ကတော့ ၁၂.၅ မီလီမီတာ ရေပိုက်ခေါင်းက ထွက်လာတဲ့ ရေဒဏ်ကို ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ခံနိုင်ပါတယ်။
ရာနှုန်းပြည့် ရေစိုခံတဲ့ ဖုန်းများဟာ ဒုတိယ ဂဏန်း ၇ ကနေ စပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စွမ်းရည်များဟာ ကွဲပြားပါတယ်။ နံပါတ် ၇ ဟာ ရေအနက် ၁ မီတာ အထိ် ရေထဲနှစ်ခြင်းကို ခံနိုင်ပါတယ်။ နံပါတ် ၈ ကတော့ ရေအနက် ၁ မီတာထက် နက်တဲ့ နေရာများအထိ ယူဆောင် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
ရာနှုန်းပြည့်ဆိုပေမယ့်လည်း စိတ်ချလို့တော့ မရပါဘူး။ တရားဝင် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်များအရ ရေစိုခံနိုင်မှု စွမ်းရည် အမြင့်ဆုံး နံပါတ် ၉ ဟာ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အပေါ် မူတည်၍ ရေထဲမှာ နှစ်မြှပ် နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ သာမာန်အားဖြင့်တော့ နံပါတ် ၉ စံနှုန်းပါတဲ့ စမတ်ဖုန်းများဟာ ရေ လုံးဝ မ၀င်အောင် အလုံပိတ်ထားပါတယ်။ ရေ၀င်ရင်လည်း ဖုန်းကို ပျက်ဆီးနိုင်စေလောက်တဲ့ ပမာဏအထိ မ၀င်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
IP စံနှုန်းများ ပါတဲ့ စမတ်ဖုန်းများ
ရေစိုခံ ဖုန်းများဟာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း စိတ်မချရဘူးလို့ ထပ်ပြောပါရစေ။ ဖုန်းကုမ္ပဏီများရဲ့ တရားဝင် ၀က်ဆိုက်များမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ရေစိုခံ စွမ်းရည်များကို လေ့လာသင့်ပါတယ်။ IP စံနှုန်း မြင့်မားရင်တော့ ရေချိုးခန်း၊ ရေကူးကန် အနီးအနားမှာ ယူဆောင်အသုံးပြုဖို့ စိတ်ချရပါတယ်။
IP67 စံနှုန်းပါတဲ့ ဖုန်းများကတော့ iPhone X, Huawei Mate 10 Pro, Google Pixel2, Pixel XL 2, HTC U11 , iPhone 8 နဲ့ iPhone7တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ IP68 စံနှုန်းပါတဲ့ ဖုန်းများမှာ Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, LG V30, LG G6, Sony Xperia XZ1, Sony Xperia XZ Premium နဲ့ the Samsung Galaxy S7 & S8 Series များဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနခေ့တျေ စမတျဖုနျးမြားဟာ ရစေိုခံတယျလို့ ထုတျလုပျရောငျးခတြဲ့ ကုမ်ပဏီမြားက ကွျောညာနကွေပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရစေိုခံစံနှုနျးမြားစှာ ရှိတဲ့အတှကျ သငျ့ စမတျဖုနျးဟာ ဘယျလောကျအထိရစေိုခံသလဲဆိုတာ လလေ့ာထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
IP ရဲ့ အဓိပ်ပါယျ
IP ရဲ့ အရှညျဟာ Ingress Protection ဖွဈပွီး ဖုနျးအတှငျးပိုငျး အစိတျအပိုငျးမြားကို ရေ၊ ဖုနျမြား မထိအောငျ ကာကှယျနိုငျတဲ့ စံနှုနျး ဖွဈပါတယျ။ IP ရဲ့ နောကျမှ ဂဏနျးမြားကတော့ ကာကှယျမှု စှမျးရညျကို ဖျောပွပါတယျ။ ဂဏနျးနှဈလုံးရဲ့ အရှဘေ့ကျ ဂဏနျးဟာ ၅ နဲ့ ၆ မြား အမြားစု ဖွဈပါတယျ။ ၅ ဟာ ဖုနျမြားကို ရာနှုနျးပွညျ့ မကာကှယျနိုငျဘူးလို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။ ၆ ကတော့ ဖုနျ၊ သဲမြားကို ရာနှုနျးပွညျ့ ကာကှယျနိုငျပါတယျ။ တဈခါတဈလမှော IPX8 လို့ သတျမှတျထားတာကို တှရေ့မှာပါ။ အဲဒါကတော့ ကုမ်ပဏီဟာ IP စံနှုနျးကို တိကစြှာ မဖျောပွခငျြလို့ ဖွဈပါတယျ။
IP စံနှုနျးမှာ ဒုတိယ ဂဏနျးဟာ ရစေိုခံ စှမျးရညျကို ကိုယျစားပွုပါတယျ။ သူဟာ ပထမ ဂဏနျးထကျ ပိုမို ရှုပျထှေးပါတယျ။ ဒီနခေ့တျေ စမတျဖုနျးမြားမှာ ဒုတိယ ဂဏနျးဟာ အနညျးဆုံး ၃ ၊ ၄ ကနေ စပွီး အဲဒါဟာ ရစေကျရပေေါကျမြားကို ခံနိုငျတယျလို့ ဖျောပွပါတယျ။ မိုးရထေဲမှာ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ပိုမိုစှမျးရညျမွငျ့မားတာက နံပါတျ ၅ က စပါတယျ။ နံပါတျ ၅ ဟာ ၆.၃ မီလီမီတာ ရပေိုကျခေါငျးက ထှကျလာတဲ့ ရဒေဏျကို ဘကျပေါငျးစုံကနေ ခံနိုငျပါတယျ။ နံပါတျ ၆ ကတော့ ၁၂.၅ မီလီမီတာ ရပေိုကျခေါငျးက ထှကျလာတဲ့ ရဒေဏျကို ဘကျပေါငျးစုံကနေ ခံနိုငျပါတယျ။
ရာနှုနျးပွညျ့ ရစေိုခံတဲ့ ဖုနျးမြားဟာ ဒုတိယ ဂဏနျး ၇ ကနေ စပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ စှမျးရညျမြားဟာ ကှဲပွားပါတယျ။ နံပါတျ ၇ ဟာ ရအေနကျ ၁ မီတာ အထိ ရထေဲနှဈခွငျးကို ခံနိုငျပါတယျ။ နံပါတျ ၈ ကတော့ ရအေနကျ ၁ မီတာထကျ နကျတဲ့ နရောမြားအထိ ယူဆောငျ အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။
ရာနှုနျးပွညျ့ဆိုပမေယျ့လညျး စိတျခလြို့တော့ မရပါဘူး။ တရားဝငျ အဓိပ်ပါယျ ဖှငျ့ဆိုခကျြမြားအရ ရစေိုခံနိုငျမှု စှမျးရညျ အမွငျ့ဆုံး နံပါတျ ၉ ဟာ စမတျဖုနျးထုတျလုပျသူရဲ့ သတျမှတျခကျြအပျေါ မူတညျ၍ ရထေဲမှာ နှဈမွှပျ နိုငျတယျလို့ ဆိုပါ တယျ။ သာမာနျအားဖွငျ့တော့ နံပါတျ ၉ စံနှုနျးပါတဲ့ စမတျဖုနျးမြားဟာ ရေ လုံးဝ မဝငျအောငျ အလုံပိတျထားပါတယျ။ ရဝေငျရငျလညျး ဖုနျးကို ပကျြဆီးနိုငျစလေောကျတဲ့ ပမာဏအထိ မဝငျဘူးလို့ သိရပါတယျ။
IP စံနှုနျးမြား ပါတဲ့ စမတျဖုနျးမြား
ရစေိုခံ ဖုနျးမြားဟာ ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး စိတျမခရြဘူးလို့ ထပျပွောပါရစေ။ ဖုနျးကုမ်ပဏီမြားရဲ့ တရားဝငျ ဝကျဆိုကျမြားမှာ ဖျောပွထားတဲ့ ရစေိုခံ စှမျးရညျမြားကို လလေ့ာသငျ့ပါတယျ။ IP စံနှုနျး မွငျ့မားရငျတော့ ရခြေိုးခနျး၊ ရကေူးကနျ အနီးအနားမှာ ယူဆောငျအသုံးပွုဖို့ စိတျခရြပါတယျ။
IP67 စံနှုနျးပါတဲ့ ဖုနျးမြားကတော့ iPhone X, Huawei Mate 10 Pro, Google Pixel2, Pixel XL 2, HTC U11 , iPhone 8 နဲ့ iPhone7တို့ ဖွဈပါတယျ။ IP68 စံနှုနျးပါတဲ့ ဖုနျးမြားမှာ Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, LG V30, LG G6, Sony Xperia XZ1, Sony Xperia XZ Premium နဲ့ the Samsung Galaxy S7 & S8 Series မြားဖွဈပါတယျ။
Camera ၄ လုံးပါတဲ့ Nova 3i ကို ကြေညာ